ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौं – बिहिवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । बुधबार प्रतितोला ८८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजारले बढेर तोलाको ८९ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैंयाले बढेर प्रतितोला १२ सय ६० रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ ।
अन्य समाचार : फेरि बढ्यो अमेरिकी डलरसहित सबै देशको विनिमयदर, हेर्नुहोस् कुनको कति ? काठमाडौं । बिहिबार अमेरिकी डलरसहित अन्य सबै देशको विनिमयदर बढेको छ ।